Indooneezhiyaan hariiroo Ityoophiyaa waliin qabdu cimsuu akka feetu beeksifte – Fana Broadcasting Corporate
Indooneezhiyaan hariiroo Ityoophiyaa waliin qabdu cimsuu akka feetu beeksifte
Finfinnee, Hagayya 16,2011 (FBC) – Indooneezhiyaan hariiroo Ityoophiyaa waliin qabdu cimsuu
akka feetu Ityoophiyaatti Ambaasaaddarri biyyatti Al Bushiraa Baasnuur ibsaniiru.
Ambaasaaddarichi yeroo ammaa kana dhaabbilee Indoonezhiyaa 5 Ityoophiyaa keessatti damee misooma garaagaraarratti bobba’anii hojjechaa jiru jedhan.
Abbootiin qabeenyaa biyyatti gara Ityoophiyaa dhufanii hojii akka eegalaan fedhii guddaa akka qaban ibsaniiru.
Abbootiin qabeenyaa ityoophiyaatti dame invetimentii irratti bal’inaan akka hirmaata Imbaasiin Indooneezhiyaa Finfinneetti argamu cimee hojjechaa akka jiru himeera. Kanaaniis hariiroon biyyoota lamanii caalumatti cimuuu akka danda’u Ambaasaaddarichi himaniiru.
Ambaasaaddarichi walitti dhufeenyi aadaa fi hawaasummaa biyyoota lamaan giddu jiru caalumatti akka cimuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta’u, bara dhufu barattoota Ityoophiyaa 20 ta’an gara Indooneezhiyaa kan ergama si’a ta’u, haaluma walfakkaatun dargaggoonni Indooneezhiyaa Ityoophiyaa akka daawwatan ni taasifama jedhaniiru.
METEK gamoo baasii Birrii miiliyoona 108 itti baase baatii lamaan booda gadhiisufi
Dawaan sammuu nama adoochu to’atame
Lolaan laga Awaash yeroo 4ffaa midhaan qonnaan bultoota barbaddeesse
Obbo Dammaqaa fi obbo Tamasgeen, Bichanaatti jiraattota waliin mari’atan
Meeksikootti reeffi namoota 29 argame
Abbootin Gadaa Irreecha Birraatin dura nageenyaa fi araara…
Ityoophiyaan, yaadni haaraan Gibts dhiyeessite fudhatama hin…
Dr Abiy bakka buutota MM Waliigala Dhimma Islaamummaa…